Royal Brunei Airlines dia mandray ny Dreamliner voalohany 787
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Royal Brunei Airlines dia mandray ny Dreamliner voalohany 787
Oktobra 4, 2013
EVERETT, WA - Nankalaza ny fandefasana ny Dreamliner 787 i Boeing sy Royal Brunei Airlines - ny voalohany ho an'ny mpitondra saina ao amin'ny Sultanate of Brunei sy ho an'i Azia atsimo atsinanana.
Niala tao amin'ny Paine Field tao Everett ny alarobia hariva ny fiaramanidina tamina sidina 6,540 12,112 kilaometatra (XNUMX km) tsy an-kijanona nody tany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bandar Seri Begawan any Brunei.
"Ity fanampiana mampientanentana ity dia mitazona ny fampiononana sy ny serivisy avo lenta ho an'ny foiben'ny kaompaniam-pitaterana anay ary mbola ezaka iray hafa hiantohana ny fiaramanidina ho maoderina ary manome fitetezana am-pilaminana sy am-pilaminana," hoy i Dermot Mannion, filohan'ny Royal Brunei Airlines. "Amin'ny maha zotram-piaramanidina kely anay dia manolotra tolotra tena manokana izahay, mampifaly ireo mpandeha aminay ny fahasoavana broniana marina hanatsara ny diany."
Ireo mpandeha mandeha amin'ny Royal Brunei Airlines dia hiaina ireo endri-javatra mahaliana ny mpandeha ao amin'ny Dreamliner 787 toy ny varavarankely lehibe kokoa sy tsy azo soloina amin'ny elektronika ary ireo fitoeran-kitapo lehibe kokoa. Nandritra ny sidina, ny 787 dia voahidy ho any amin'ny haavo ambany kokoa, manana haavon'ny hamandoana avo kokoa, ny sivana mandroso ary ny teknolojia mitaingina malama mba hahatonga ny traikefa manidina hahafinaritra kokoa sy hahafahan'ny mpandeha ho tonga amin'ny toerana nalehany hamelombelona kokoa.
Ny 787 no fiaramanidina mandroso indrindra any an-danitra miaraka amin'ireo akora mitambatra mahaforona 50 isan-jaton'ny firafitra voalohany, ao anatin'izany ny fuselage sy ny elany. Io dia ahafahan'ny Dreamliner mampiasa solika 20 isan-jato kely kokoa ary mamoaka 20 isan-jato kely kokoa ny famoahana CO (2) noho ny fiaramanidina mitovy habe amin'izany.
"Faly izahay fa nisafidy ny hanitatra ny fiaramanidina misy azy ny Royal Brunei Airlines amin'ny alàlan'ny dimy 787", hoy i Dinesh Keskar, filoha lefitry ny Asia Pacific sy India Sales, Boeing Commercial Airplanes. “Ny safidy dia porofon'ny fanoloran-tenan'ilay kaompaniam-pitaterana serivisy hanolotra serivisy tsara indrindra ho an'ireo mpandeha aminy sy hampiasana ny sidina fiaramanidina mahomby indrindra anio.”
Ny 787 dia voalahatra hanomboka hanidina isam-paritra mankany Singapore amin'ny 18 Oktobra, miaraka amin'ny serivisy lavitra any London, amin'ny alàlan'ny Dubai, izay manomboka amin'ny 1 Desambra. Manantena ny hanome ny fampanantenany 100% an'ny Dreamliner mandritra ny fotoana maharitra ny Royal Brunei ny telovolana faharoa amin'ny 2014 izay hanolorany ny 787 amin'ny sidina mankany Melbourne, Aostralia.